जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले नरैनापुरकाे स्वास्थय प्रमुखलाई अपशब्द बाेलेकाे जानकारी आएकाे छ। – Bhangaha Khabar
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले नरैनापुरकाे स्वास्थय प्रमुखलाई अपशब्द बाेलेकाे जानकारी आएकाे छ।
बाँके नरैनापुरकाे स्वास्थ शाखा प्रमुखलाई जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले गाली गरेकाे गाेप्य रुपमा जानकारी प्राप्त भएकाे छ। देश काेभिड १९ काे कारणले गर्दा पहिलाे, दाेस्राे गर्दै तेस्राे लहरकाे सामना गर्दै अाईरहेकाे सबैमा जानकारीनै छ ।
नरैनापुर गाउँपालिकाकाे एउटा स्कुलमा मलेरिया राेग सम्बन्धि अाैषधी एक बर्ष देखि थन्केकाे खुलासा भएकाे छ यसाे किन हाेला त? के जनप्रतिनिधिकाे र स्थानिय सरकारकाे अनुगमन गर्ने अधिकार छ कि छैन तर किन अनुगमन भएन त्यहाँका जनताले गाउँपालिका अध्यक्षलाई प्रशन गरेका छन ।
नरैनापुर गाउँपालिकाले र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले नरैनापुरकाे जनता माथि किन यस्ताे खेलवाड गरेकाे छ त ? DCCMC काे निर्णय विपरित नरैनापुर गाउँपालिकाले असारे बजेट खत्म गर्नकाे लागि कति हतार हाेला ?
ईपिडिमियाेलाेजी तथा सरुवा राेग विभागकाे तथ्यांकअनुसार बाँके जिल्ला नेपालकाे मलेरिया राेगकाे अति उच्च जाेखिममा रहेकाे जिल्ला हाे जसकाे फलस्वरूप जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बाँकेबाट मलेरिया राेग नियन्त्रण कार्यक्रम अन्तर्गत लामखुट्टे, उडुस, साङला, तथा माखा मार्ने किटनाशक अाैषधी नरैनापुर गाउँपालिकालाई प्रदान गरेकाे थियाे ।
नरैनापुरकाे स्कुलमा म्याद नाघेकाे ४ महिना बिति सक्दा पनि अहिले सम्म त्यसकाे व्यवस्थापन भएकाे छैन। के यस्ताेमा राखे भने राेग फाईन्ना त, नरैनापुरकाे जनता एकदमै पिडित भएकाे जानकारी राप्ती बघाैडा स्वयमसेवक दलले जानकारी दिकाे छ।